Koorsooyinka Microstation - Geofumadas
Koorsada Microstran: qaabeynta qaabdhismeedka
AulaGEO, waxay kuu keeneysaa koorsadan cusub ee diiradda lagu saaray qaabeynta astaamaha qaabdhismeedka, iyadoo la adeegsanayo barnaamijyada Microstran, kana socda Bentley Systems. Koorsada waxaa ka mid ah barashada teori ee cunsurrada, adeegsiga xamuulka iyo soo saarista natiijooyinka. Hordhaca Microstran: dulmar guud Microbarsaraan toolbars iyo shaqooyin Qaabab fudud oo dayaxeed Qaabaynta qaabka
Bentley Systems Koorsooyinka qaabdhismeedka B Koorsooyinka Microstation
Koorsada STAAD.Pro - falanqaynta qaabdhismeedka
Kani waa koorso hordhac ah oo ku saabsan falanqaynta iyo qaabeynta qaababka iyadoo la adeegsanayo barnaamijka 'STAAD Pro' ee Bentley Systems. Koorsada waxaad ku baran doontaa qaabeynta qaababka birta iyo shubka, qeexida xamuulka iyo soo saarida warbixinno. Ugu dambeyntiina waxaad baran doontaa qaabeynta, falanqaynta iyo naqshadeynta dhagxaanta. Joomateri iyo Naqshadeynta (Qaabdhismeedka Birta iyo Qaabdhismeedka) Qeexitaanno Xamuul ah ...
Koorsada Microstation - Baro Naqshadaynta CAD
Microstation - Baro Naqshadeynta CAD Haddii aad rabto inaad barato sida loo isticmaalo Microstation ee maaraynta xogta CAD, koorsadan adiga ayaa loogu talagalay. Koorsadan, waxaan ku baran doonnaa aasaaska Microstation. Wadar ahaan 27 cashar, adeegsadaha wuxuu awood u yeelan doonaa inuu si buuxda u fahmo dhammaan aasaasiga. Marka casharrada afkaarta ah la dhammeeyo, waxaan ku sii socon doonnaa ...
Bentley Systems Koorsooyinka Microstation